Fandraharahan’ny tanora Zava-dehibe ny famokarana sy fanondranana
Ny ambasady Frantsay no nanapa-kevitra amin’ny fikarakarana ny alakamisy fahatelo isam-bolana mahakasika ny fandraharahana.
Tanjona ny hamoaboasana eo anatrehan’ireo tanora tompona tetikasa na manana tetikasa amin’ny alalan’ny latabatra boribory ny fampiroboroboana ny sehatra fandraharahana. Ireo tanora afaka mifaninana (startup) izay efa sahy sahady manangana orinasa dia nizara ny fahaiza-manaony sy ny traikefany tamin’ity hetsika ity. Misy ihany koa ireo vao hanangana ny orinasany mihitsy ka hampiana sy hampahafantarina eo anivon’ny minisitry ny Indostria sy ny Varotra ary ny Asa Tanana ary ireo tompon’andraikitry ny tetikasa “Fihariana” izany. Nisy ny famelabelarana natao omaly tetsy amin’ny IFM Analakely izay nataon’ireo matihanina sy efa lasa lavitra amin’ny sehatra fandraharahana. Ankoatr’izay dia mbola hitohy ny hetsika ka hipaka hatreny amin’ny anjerimanontolo ary hezahana atao matetika miaraka amin’ireo manampahaizana eto an-toerana sy any ivelany, hoy ny tompon’andraikitra. Tsy maintsy miafara amin’ny famokarana sy ny fanondranana ny fandraharahana ataon’ny tanora Malagasy mba hisy akony mavesatra amin’ny toekarena, hoy ny tompon’andraikitra eo anivon’ny IFM, Patrick Perez. Misy 150 eo moa ireo tanora manana tetikasa izay liana tanteraka tamin’ny fifampizarana sy ny famelabelarana teny amin’ny IFM Analakely.